namany sary ho Fiarahana
Ianao manana safidy, dia liana amin’ny andavanandro amin’ny resaka sy ny mahafinaritra ny fihetseham-po avy amin’ny fifandraisana miaraka aminao ny olona tsara fa tsy mbola mahalala azy na fotsiny tsy te-ho maimaika foana
Ny toerana dia manome ny fahafahana antso an-tsary
Izany dia midika fa afaka miteny fotsiny ny feoko momba ny finday na mandany feno virtoaly daty. Izany no mahasoa isan-karazany rehefa Mampiaraka.
Mampiaraka tia mpivady, izany dia hanampy mba haka aina kely ary ny voalohany tena daty manala ny fitavozavozan, ny namana avy amin’ny firenena samy hafa mora mivory sy maneho samy hafa ny fiainana, ireo izay mitady firaisana ara-nofo mpiara-miasa, ny fitondran-tena»mini-tafa sy dinika»mba hahatakatra ny fomba ny olona iray dia mety ho ny fanatanterahana ny sitrapony.
Ahoana no mety hahita interlocutor ho an’ny fifandraisana.
Satria maro ireo mpampiasa manomboka mirona Mampiaraka ho an’ny fifandraisana matotra, ny toerana dia manome ny tena antsipirihany fanontaniana. Ohatra, raha ho an’ny penpal ivelany tahirin-kevitra avy amin’ny olona manokana tsy misy dikany, dia ho maharitra kokoa ny tanjona manan-danja.
Ny Mampiaraka toerana dia manome fahafahana ho an’ny malalaka sy mijery mombamomba mpampiasa avy ny tanàna rehetra. Mampiasa fikarohana, ianao dia afaka mivantana mamaritra ny fepetra manan-danja indrindra, ary avy eo dia miroso amin’ny fijerena rehetra mety tolo-kevitra.
Ho vokatra kokoa ny zavatra niainany, dia tokony hamantatra ny karazana mahaliana ny olona ny taona sy ny toeram-ponenana. Manomboka nahita fianarana mombamomba amin’ny sary mpijery, ary raha toa ka ny mpampiasa dia tsara ho anao, miroso amin ‘ny fandinihana ny fanazavana omena ao amin’ny fisoratana anarana amin’ny endrika — hianatra momba ny tombontsoa, Fialam-boly, ny toe-tsaina ny zavatra sasany, ary koa ny safidinao’ ny interlocutor sy ny tena tanjona ny hoe Mampiaraka.
Tia mifanerasera, sahaza ho mahafinaritra ary aoka tsy mankaleo andavanandro mba hahatonga ny fiainana vendrana sy ataotao
← Mba hihaona ny zazavavy tsy misy fisoratana anarana
Video mampiaraka →